Available Xfce 4.10pre2 + Rakibo | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Tan iyo Jimcihii la soo dhaafay waxaan haynaa tan Nooca Xfce 4.10pre2, oo ku soo dhowaanaya uguna dhowaanaya nooca ugu dambeeya ee nasiibka kuwa isticmaala tan Deegaanka Desktop, oo markaa u hoggaansamaysa qorshaha horumarinta.
Noocaan cusub waxaa ka mid ah xirmooyinka soo socda:
mashiinka gtk-xfce 2.99.3
hoos udhaca 0.1.24
Horumarro badan ayaa lagu daray, oo aan ka arki karno xidhiidhkan. Siidayntaani waxay kujirtaa astaamo cusub sida hagaajinta waxqabadka faylalka Thunar, iyo hagaajinta Tiling in xfwm4. Wax kasta oo kale waa cilad hagaajinta iyo cusbooneysiinta tarjumaadda.
Faylasha si shaqsi ah ayaa loogala soo bixi karaa xiriiriyahan:
In kasta oo aan kugula talinayo inaad soo dejiso feyl isku-dhafan oo dhammaantood lagu soo daro xiriiriyahan:
Haddii aad ku dhiirratid inaad ururiso, gudaha Tijaabada Debian Waxaan ku guuleystay si guul leh anigoo adeegsanaya qoraalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Available Xfce 4.10pre2 + Rakibaadda
Ma fahmin sababta aad u uruurineyso baaritaanka debian-ka, miyaanay fiicnayn inaad sameyso suuxdin iyo qabashada xirmooyinka aan degganeyn ee debian ???
Waxaan u arkaa inay ka xasilooni yar tahay in la soo ururiyo baakadaha qaarkood ee beta, marka loo eego qabashada xirmooyinka debian xasilloonida, laakiin waxaa jira qof kasta oo waalan oo leh mawduuciisa
Waxay tahay in xirmooyinkaasi aysan galin wax keyd ah Debian.. Sidoo kale xusuusnow wax, marar badan xaqiiqda ah in xirmada X aysan ku jirin Debian Sababtoo ah maahan inay xasilloon tahay, laakiin maxaa yeelay laguma tijaabin dhismayaasha oo dhan. Waan isticmaalayaa Xfce 4.10pre2 tan iyo pre1 oo aanan dareemin wax xasilooni daro ah.
Mana la gasho falsafada ah inaan uruuriyo baakado, kaalay, waqtiyadii aan u adeegsaday igama muuqan inay tahay disto in la soo ururiyo, waan khaldami karaa laakiin ma ogi, waxay i siisay dareenkaas
Hubi inaysan ahayn falsafad, laakiin xaaladdan ma sugi karo Xfce 4.10 gasho bakhaarrada, markaa soo uruurintoodu waa ikhtiyaarka kaliya ee ii hartay. Sikastaba, waxaan kuu sheegayaa, waxba ma dhacaan, wax walbana waxay u dhaqmaan sidii la rabay.
NOMAS way ka maqnaan lahayd wixii ay ku qaadatay sameynta nooc cusub oo hadda fashilmay
In kasta oo horumariyeyaasheeda mararka qaarkood xoogaa la xidho, haddana runtii waan ku faraxsanahay shaqadii ay qabteen Xfce. Waa run, iyagaa dib u dhigay toodii, laakiin haddii aan ku xisaabtano inay yaryihiin iyo waqtiga ay u hureen XfceWaa midda ay iyagu xorta yihiin, maxaa yeelay, waxba laguma caayi karo, runti.
Waxaa laga yaabaa haddii ay ahaan lahayd mid fudud oo qaab ah sida lxde, waxaan siin lahaa isku day
Sababtoo ah waxay hubaan inaanay wali kujirin xasillooni ama tijaabooyin.
Mana fahmin sababta aad ugu isticmaasho debian, xasilloonideeda ???
Tirtir uruurinta xirmooyinka beta ayaa xasilloon ****
Kaalay, qofna uma dhimanayo inuu soo ururiyo BETAS. Haddii aad ku jirto baaritaanka Debian ama xasillooni darro, ma aha inaad wax badan ka daryeesho xasilloonida, haddii aad rabto inaad Stable sii joogi lahayd.
Markii aan adeegsaday Debian marar badan waxay u baahnayd isugeynta maxaa yeelay waxaan u baahanahay wax aan ku jirin keydka, sida pnmixer ee xfce oo noloshayda ku badbaadisay arrinta xakameynta mugga. Ama mednafen wip inuu ku sameeyo rom jabsiga linux. Waxaan sidoo kale xasuustaa zdoom maaddaama uusan jirin nooc Debian ah.
Sikastaba, oo hadaan kahadalno BETA, markaa tijaabinta waxay u taal cida rabto. Haddii wax jabaan, waa hubaal inay xal leedahay.
Xfce taasi ma fiicantahay? Waxaan hayaa Arch + MATE, laakiin sidee si fiican ugu rinjiyeysaa…. hehe
Haddii aad rabto in kombuyuutarkaagu duulo, isku day lxde ama sanduuqa furan
Debian-kayga wuxuu la duulaa XFCE kaliya wuxuu ku cunaa 100mb kabaha.
oo waxaan haystaa 2 gb waxaan leeyahay wan kuu hayaa.
Way ku baabbi'isaa 100mb, wuxuu rabaa sawir
Waa hagaag bal qiyaas in, 1Gb ee RAM, ay ka bilaabato 79Mb 😀
MATE sidoo kale aniga 100 XNUMX ayuu i cunaa, waxaan isku dayi doonaa xfce oo u muuqda mid fiican.
Waa inaad isku daydaa 😀
elav <° Linux Shaki ayaan ka qabaa .. maxaa keenay in noocyada kernel ee dhawaa qaar had iyo jeer cillad ku keenaan codka?
Waxaan ku weydiinayaa tan maxaa yeelay waxaan isku dayay fedora iyo fedora waa mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'distros' ee had iyo jeer la jaan qaada kernel-ka .. midka hada ku jira nooca uu yahay. dekedaha pc-ga iyo dekedaha hore ee aan ku xiro dhagaha dhagaha ma haysan wax soo saar maqal ah.
ka dib waxaan isku dayay tijaabinta debian-ka isla sidii ayaa dhacday ..
ka dib isku day ubuntu 2 beta 12.04 .. waxayna haysatay isla dhibaatadii
laakiin qaababka xasiloon ee ubuntu / reexaanta dhib iima siinayso ..
I hanuuni .. ii sheeg sababta ay waxani u dhacayaan?
Wax fikrad ah maleh. Isbeddel kasta oo ku yimaada Kernel, waxyaabo ayaa lagu daraa ama laga saaraa taas oo saameyn ku yeelan karta noocyada Qalabka qaarkood.
Adiga ayaa umuuqda sida dhibka alsa marka loo eego dhibaatada garaaca wadnaha, waa inaad aragtaa qaabka alsa laakiin waa sida caadiga ah, dad aad u yar ayaa fahansan in ...
oo xagee ka arki karaa isku duubnaanta alsa?
hadaad ula jeedo markaad furto terminal-ka oo aad dhigto "alsamixer" horay waan u sameeyay mana ii shaqeyn
Waad arki kartaa haddii alsa ay kuu kordhinayso koodhadhka:
bisad / proc / asound / card * / codec * | grep Codec
Haddii guddigaagu ka muuqdo liiska, hubi in qaybaha ay ku rakiban yihiin:
bisad / proc / asound / modules
Uma maleynayo inay ku cuneyso 300 mb kombiyuutarada maanta, waxaad dhahdaa 16Gb min.
Wanka badan ee aad haysatid, ayaa kaaga badan intaad qarashgareyso, sidaa darteed waxa macquul ah ayaa ah in la isbarbar dhigo cunista wan ee isla wanka.
Waa maxay warka xaqiiqda ah ee runta aan anigu ahay laakiin waxaan adeegsadaa nooca 4.8 Laakiin waxaan isku dayi doonaa 4.10
@elav, qoraalka ma ka shaqeeyaa Debian AMD64 sidoo kale?
Nin yahow, waligay iskuma soo darin 64 Bits .. Waxaan filayaa inay caawimaad ka geysaneyso ku darista CALANADA qaar, waxaan rajaynayaa in saxa ay shakiga ka saareyso ^^
Xaqiiqdii ./configure wuxuu ogaadaa nidaamkaaga sidaa darteed waxay u diyaarineysaa inay soo uruuriso dhismaha la heli karo illaa iyo inta koodhku oggol yahay in lagu soo ururiyo 64 jajab, oo hadda dhammaan koodhadhku oggolaadaan, tani guud ahaan way ku fashilantay emulators-kii hore sababtoo ah qayb ka mid ah koodhkeedu wuxuu ku jiray isku-dubaridaha ama lambar kale oo aan la diyaarin.
Isticmaalka xiisaha leh ee debian + xfce, waxaan u maleynayaa in lxde isticmaalka uu ka yaraan doono ama ka soo horjeedka la mid yahay ???
Isticmaalka lxde wuu yaryahay, maxaa been loo sheegayaa. Waxay leedahay ku-tiirsanaan yar waxayna la shaqeysaa xirmo yar. Waxa kale oo ay leedahay cillado kale oo qaar badani u arkaan wax soo jiidasho leh XFCE iyo kuwa kale oo aad u faa'iido badan, laakiin taas dibedda ayaa lagu xallin karaa LXDE. Sikastaba, waa su’aal faa iidooyin gaar ah leh. Waxaan haystaa kombuyuutar daaraya qorfaha dhib la'aan, oo leh 3 GB DDR3, laakiin ma siin doono wax ka badan 700 megabyte oo xusuusta bilowga iyo feyl ahaan !!!!! Halka XFCE lagu habeeyay dhowr waxyaalood oo dheeri ah oo aan isticmaalo, sida libreoffice-ka oo horay loogu xareeyay xusuusta, pnmixer iyo in ka badan ma gaaraan 300 bilowga. 300, maxaa yeelay waxaan hayaa waxyaabo badan oo aan rakibo bilowga oo ay la socdaan dhowr qoraallo shaqsiyeed. LXDE waligeed isbarbar dhig isticmaalka.
Halkan waxaan kaaga tagayaa kuwayga Debian + Xfce marka kalfadhiga la bilaabo.
Ha iloobin, inta aan ku xaragoonayo bilowga iyo jinka furan waligey culeys noocan oo kale ah ma lihi doono. Haddii ama haddii aan u baahanahay xafiiska shaqada si aan dhaqso ugu kiciyo dukumintiyada iyo foomamka. Dhinaca kale waxaan u isticmaalaa samba si aan u dhinto oo aan lacag uga qaato bilowga, muusigeyga la'aanteed waan dhintaa. NetworkManager sida shaydaan maxaa yeelay marba marka ka dambeysa waxaan u jeestaa taleefanka gacanta iyo tiknoolajiyadiisa 3g ee aadka u xun (waad ku mahadsan tahay Claro oo reer Argentina ah adeeggaaga liita). Iyo dhowr waxyaalood oo kale. Waxaan u maleynayaa inay igu bilaabaneyso 278, laakiin aan sidoo kale tixgalino in kor loo qaado saamiyada samba ee ka hooseeya .gvfs (oo aan u adeegsado iskuxirka iyo sameynta galka deegaanka) dhowr adeeg oo dheeri ah oo aan ubaahanahay waa la raraa. Sikastaba, ma cabanaayo, waa waxyaabo aan ubaahanahay HAA ama HAA.
Waa run in bilowgii aan qaatay waxyaabo yar ^^, laakiin waa in xitaa laga bilaabo 278Mb ay wali tahay adeegsi aad u hooseeya ee kombiyuutarada hadda jira.
Sax, taasi waa waxa aan ku saabsanaa, xaddiga adeegyada aan wado, laakiin libreoffice-ka aan dejiyay inaan isticmaalo xusuus badan ayaa aad u hooseeya. Marka loo barbar dhigo CInnamon, tusaale ahaan. Isla markii aan arkay cunitaanka, weerar ayaa i qabsaday.
Dadka Xubuntu waxay sugi karaan oo dib u dhigi karaan siideyntiisa xoogaa si loo hirgeliyo Xfce 4.10. Waa maxay isticmaalka bilaabida Xubuntu isla maalinta Ubuntu?
In kasta oo aan aad uga walaacsanahay inaan tijaabiyo XFCE 4.10, waxaan u maleynayaa inaan sugi doono illaa iyo inta rasmiga ah ee la bilaabayo. Waxaan ixtiraam badan u hayaa betas.
Go'aan xikmad leh 😀
Hagaag, haddii ku dhowaad wax walboo loo malaynayo inay yihiin ciladaha cilladaha, ma arko sababta aan u sugin sii deynta
Elav, waan xaqiijinayaa, horumariyayaashu naftooda waxay saareen kala-bixiye aan la arki karin oo ballaadhiyay guddiga si loo kala saaro liiska iibka iyo in astaamaha ku yaal dhinaca midig ay ku jiraan dhammaadkaas. Haddii aan awoodo, oo aan sharraxaad ka bixiyo nooyga, xal aad u liidata.
Thunar wali malaha tab iyo / ama waxay ku tusaysaa laba ama in ka badan faylal isku daaqad ah. Sidee layaableh ... haddii ay umuuqdaan "inay xidhan yihiin" sidaad u sheegayso horumariyeyaasha xfce. Waxaan u maleynayaa in qof ay tahay inuu u sameeyay adeegyadan billaha, ama laga yaabee inay yihiin oo aadan wax faallo ah ka bixin. Haddii aad hayso macluumaad ku saabsan, waan ku mahadsan yahay maxaa yeelay waxaan isticmaalayaa maamulekan.
Iyagu ma ay qorsheyneynin inay ku daraan tabs Thunar, ugu yaraan sii deyntaan.
Oo way sii socon doontaa bilaa tabs. Iminka kuwa horumariya ee Xfce waxay leeyihiin in aad u cad. Waxaan xasuustaa inaan ku arkay madasha Xfce isticmaale sheegay inuu sameynayo fargeeto Tabbed ah, laakiin aan laga maqal. Waxaa laga yaabaa inuu afduubay maafiyada Ruushka, oo ay kireysteen kuwa soo dhisay Xfce, si aysan taasi u tusin Thunar tabs, wali waa iftiin. 😛
PCMan ayaa tusaale u ah tan, taageerada marin u helka shabakadda, tabs, maaraynta suulka wanaagsan waligoodna ma joogsanayn iftiin aad u sarreeya.
Andale, 4.10 hadda waa xfce.org/about/news/?post=1335571200
Filter Anti-Hoygan loogu talagalay blogyada